Vaovao Geo-Engineering - Taona amin'ny fotodrafitrasa - YII2019 - Geofumadas
Oktobra, 2019 Engineering, fanavaozana, Microstation-Bentley
Amin'ity herinandro ity dia tontosa any Singapore ny hetsika Fihaonamben'ny fotodrafitrasa taona - YII 2019, izay lohahevitra lehibe dia mifantoka amin'ny firosoana mankany amin'ny nomerika miaraka amin'ny fifantohana amin'ireo zaza kambana nomerika. Ny hetsika dia natolotry ny Bentley Systems sy ireo mpiara-dia stratejika Microsoft, Topcon, Atos ary Siemens; fa amin'ny fiaraha-miasa mahaliana fa tsy mizara hetsika fotsiny, dia nisafidy ny hanolotra vahaolana misy valiny miaraka izy ireo ao anatin'ny drafitry ny firoboroboan'ny indostria fahefatra mihatra amin'ny geo-engineering, indrindra amin'ny sehatry ny injeniera, ny fananganana, ny famokarana indostrialy ary ny fitantanana ny tanàna nomerika.
Ny tanàna, ny dingana ary ny olom-pirenena.
Izaho manokana, taorian'ny 11 taona nandraisana anjara tsy tapaka ho mpanao gazety na mpitsara tamin'ity hetsika ity, ireo forum momba ny indostria no tena tiako indrindra. Tsy hoe satria zavatra vaovao no ianarana manokana, fa noho io fifanakalozana io dia ahafahantsika mahita izay alehan'ny zavatra. Tsy misy na inona na inona mitranga amin'ny indostria hafa, fa amin'ny ankapobeny amin'ity taona ity dia voamarika ny firosoana amin'ny fizotrany sy ny olom-pirenena ho ivon'ny fiheverana; Tsy hafahafa raha ny fitaovana IT rehetra an'ity orinasa ity dia notsorina tamin'ireto lohahevitra ireto, amin'ny sehatra maodely iraisana sy fiaraha-miasa.
Ny forum enina amin'ity hetsika ity dia:
Ny tanàna nomerika: Amin'ity taona ity ity no tiako indrindra, izay manolo-tena hanome fihemorana mivantana amin'ny fifaninanana amin'ny filazany fa ny fananana ao an-tanàna dia mihoatra ny GIS + BIM. Ny tolo-kevitra momba ny sanda dia ny fampisehoana ireo rafi-pifandraisana mifandraika sy mikoriana tsy misy vahaolana marobe, mifanaraka amin'ny vondrona portfolio izay hitantsika tamin'ny taona lasa sy ny fahazoana vaovao fa tsy mieritreritra ny fampidirana ireo modely fitantanana angona angovo ary ny jeografia, izy ireo dia mikasa ny hanamora ny fanaovana maodely ny tanàna amin'ny fomba fijery holistic, mieritreritra ny fizotran'ny asa ataon'ny olona amin'ny tanàna: ny drafitra, ny injeniera, ny fananganana ary ny asa.
Rafitra sy angovo azo avy amin'ny rano: Ity forum ity dia mifantoka amin'ny fanamby amin'ny fitondran-tena amin'ny fanjifana loharanon-karena sy ny fanomanana fepetra hitohizan'ny fitomboan'ny fangatahana. Ny filokana sanda dia amin'ny fomba azo andraisana fanapahan-kevitra tsara kokoa avy amin'ny fitantanana amin'ny ankapobeny ny tambajotra mizara, famatsiana amin'ny alàlan'ny fitantanana mandeha ho azy.
Lalambe sy fitaterana: Ny mekanika fanamboarana automatique, fampahalalana eo noho eo amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra, fitantanana ny fampihenana ary fampihenana ny vidiny eo ambany fitantanana ny tsingerin'ny fiainana misy ireo fananana sy fanitarana mifototra amin'ny fitomboan'ny tanàna dia horesahina eto.
Campus sy trano: Ity forum ity dia mikasa ny hifanakalo hevitra sy hametraka ny fanamby amin'ny fanahafana ny fotoana sy ny fivezivezen'ny olona. Ankoatr'izay, ny fomba fitantanana nomerika dia mety hitarika amin'ny fanovana ny vahaolana amin'ny fivezivezena an-drenivohitra.
Làlana sy lalamby: Ity dia hampiseho ny fomba ahafahanao mamolavola indray ny fizotran'ny fananganana sy ny fomba fiasa amin'ny alàlan'ny mekanika amin'ny fananganana niasa dizitaly sy ny simulation.
Ireo fotodrafitrasa indostrialy: Ity dia sehatra iray matotra tsara amin'ny vahaolana nataon'i PlantSight ho an'ny fampandehanana ireo tetik'asa efa nokatsahina ao amin'ny rafi-pamokarana entona, solika ary fitrandrahana.
Ny fahamatoran'ny fiadiana
Fampianarana faran'izay tsara izy io mikasika ny fomba nanoloran'ny orinasa iray fehezin'ny fianakaviana, fa tsy ny besinimaro, ny fanamafisana ny fananany hananana fahakingan-tsaina amin'ny revolisiona manaraka eo amin'ny sehatry ny indostria, miaraka amin'ireo orinasa mitarika ao amin'ny injeniera (Topcon), fandidiana (Siemens) ary ny fifandraisana (Microsoft). Tao anatin'izay taona faramparany dia hitantsika izay mety ho ProjectWise hahatratra ny tambajotra Azure, ary koa ny PlantSight manoloana ny tsena famokarana indostrialy iray manontolo.
Tamin'ity taona ity, ny tsy nampoizina dia tsy latsa-danja kokoa, miaraka amin'ny fiaraha-miombon'antoka Bentley Systems - Topcon, mifantoka amin'ny famoronana fomba fananganana vaovao mifototra amin'ny teknolojia sy ny fanamorana ny fizotrany. Ity vahaolana ity dia tsy avy amin'ny volon'ilay lobaka, fa vokatry ny fikarohana sy fiaraha-miasa maherin'ny herintaona niarahan'ireo mpandray anjara maherin'ny 80 teo anelanelan'ny fikambanan'ny governemanta, ny orinasa tsy miankina ary ny matihanina izay efa nampiasa vahaolana IT, fitaovana, fombafomba ary tsara. fomba fanao amin'ny tsingerim-piainan'ny tetikasa fotodrafitrasa lehibe. Tanteraka izany Akademia fananganana, ary ny vokatr'izany dia Asa fananganana dizitaly DCW
Asa fananganana dizitaly, Misokatra ho an'ny karazan'entana rehetra ao anatin'ny fironana revolisiona fahefatra, fa amin'ny sehatra fananganana, ny orinasa dia afaka manatsara ny tetik'asa fananganana azy ireo - amin'ny alàlan'ny fampiasana alàlan'ny alàlan'ny atrikasa nomerika - miaraka amin'ny ekipa manam-pahaizana ny DCW, izay kosa, dia hanome automatique automatique sy ilay serivisy antsoina hoe "twinning".
Ny fananana io simbiosis io dia eo amin'ny orinasa mpiara-miasa, Boky fanorenana dizitaly, Bentley sy Topcon indray dia hikatsaka ny hametraka ho laharam-pahamehana ny fampiasam-bolan'izy ireo amin'ny lafiny fanatsarana sy fanavaozana ny lozisialy injenieran'ny fananganana. Greg Bentley, CEO an'ny Bentley Systems dia tsy afaka nametraka izany tsara kokoa:
"Rehefa nahafantaranay i Topcon sy ny fahafahan'ny Mpanamboatra mba hamolavola ny famoahana ny tetikasa renivohitra, dia nanome toky izahay fa hahavita ny takian'ny rindrambaiko. Raha ny marina, ny fahaizan'ny rindrambaiko vaovao dia ahafahana manangana kambana nomerika: toe-javatra nomerika niova fo, singa nomerika ary fandaharana nomerika. Ny sisa tavela amin'ny alàlan'ny lasa nomerika ho an'ny fananganana fotodrafitrasa dia ny manararaotra ny teknolojia ny fizotry ny olona sy ny fizotran'ny mpandrafitra. Izahay sy Topcon dia nanolo-tena betsaka amin'ny loharanon-karena tsara indrindra ananantsika, matihanina manana traikefa amin'ny fananganana sy rindrambaiko, hanompoana soroka amin'ny soroka, amin'ny fiarovan-tena virtoaly, hanova ny fampidirana nomerika takiana. Ny fiaraha-miasa Digital Digital Works dia manana ny fitantanana feno sy ny fanoloran-tena amin'ny orinasanay roa, mampitombo ny tanjany manokana mba hanampiana ny mety hitrangan'ny fanamboarana hanakatonana ny hantsam-panamboarana manerantany.
Bebe kokoa avy amin'ny kambana nomerika
Ny foto-kevitra Digital Twin dia avy tamin'ny taonjato lasa, ary na dia mety natsangana tamin'ny maty ho lasa lamaody mandalo aza izy io, ny zava-misy fa ireo mpitarika indostrialy manana io fitaomana amin'ny teknolojia sy ny tsena io dia mamindra azy io indray, dia manome antoka fa ho fironana tsy azo ovaina izany. Digital Twin dia tena mitovy amin'ny haavo 3 an'ny metodrafitra BIM fa toa izy ireo izao no Fitsipiky ny Gemini izay hanamarika ny tsipika làlana.
Ao amin'ny fanavaozana ProjectWise 365-iza no mampiasa ny Microsoft 365 sy ny teknolojia miorina amin'ny SaaS- ny serivisy miorina amin'ny tranokala - rahona- ary mitombo ny fampiasana ny angon-drakitra BIM, mamela ny serivisy toa an'i iTwin hijanona ho an'ny karazan-dahatsary rehetra sy amin'ny ambaratonga rehetra ho an'ny karazana orinasa rehetra. Amin'ny heviny malalaka kokoa, miaraka amin'ny ProjectWise 365 dia afaka mitantana ny zavatra rehetra mifandraika amin'ilay tetik'asa (drafitra fivarotana, fitantanana ireo làlana miara-miasa na fifanakalozana fifanakalozana).
Ireo mpampiasa –professionals- afaka miditra amin'ny iTwin Design Review, mba hampifandraisana azy amin'ilay tetikasa amin'ny fomba mihetsika, mivezivezy eo anelanelan'ny 2D sy 3D. Ankehitriny, ireo izay hampiasa ity fitaovana ity ho an'ny tetikasa, miaraka amin'ny fampidirana ProjectWise dia azo atao ny manova ny kambana nomerika amin'ilay tetikasa, hitandrina ny toerana sy ny fotoana nitrangan'ny fanovana. Ireo fampiasa rehetra ireo dia ho hita any aoriana amin'ity taona ity 2019.
"Ny kambana nomerika amin'ny foto-drafitrasa sy injeniera fananganana dia mandroso miaraka amin'ireto fanambarana ireto, indrindra fa ny serivisy rahona vaovao. Ireo mpampiasa ProjectWise, ny rindrambaiko fiaraha-miasa BN 1 nomerao amin'ny fandalinana ny tsena ARC vaovao dia nahatonga an'i Bentley ho iray amin'ireo mpampiasa ISV lehibe indrindra any Azure. Manitatra ny serivisy misy rahona eo amin'ny sehatra CloudWise 365 tranonkala ProjectWise 4 izahay; amboary ny serivisy raharaham-barotra iTwin ho an'ny famolavolana famolavolana na matihanina amin'ny sehatra; sy fanitarana ny faran'ny SYNCHRO amin'ny alàlan'ny serivisy rahona. Ny fanomezana ny tetikasa fotodrafitrasa dia mifototra amin'ny fotoana, ary koa ny habaka. Ny fanamboarana nomerika sy ny kambana XNUMXD ao Bentley dia mitondra fandrosoana dizitaly ho an'ny fotodrafitrasa fotodrafitrasa, anio, manerantany! »Noah Eckhouse, filoha lefitry ny fanaterana ny tetikasa ho an'ny Bentley Systems
Raha ny serivisy rahona SYNCHRO Ny mpampiasa Bentley Systems dia afaka mamorona modely hitantana ny famonoana tetikasa, angon-drakitra eny an-tsaha na any amin'ny birao, ary koa ny fijerena ireo asa rehetra, ny maodely ary ny sarintany izay mahomby amin'ny fisamborana ny angona ary manamaivana ny loza ateraky ny fisehoana. trangan-javatra sasany Amin'ireo rehetra voalaza etsy ambony, ny fampidirana ny tena zava-misy sy ny Hololens 2 an'ny Microsoft dia ampiana, ka nahatonga ny fijerin'ny 4D momba ny fandrafetana tetikasa, izany hoe ny fahitana ny 4D sary kambana nomerika.
Fahazoana vaovao vaovao
Manatevin-daharana ny teknolojia toy ny Global Mobility Simulation Software (CUBE) ny fianakaviana Bentley Systems - citilabs, famakafakana (Streetlytics), sy ny hafa mifandraika amin'ny fitantanana ny angon-drakitra geospatial, Orbit GT avy amin'ny mpamatsy Belzika Orbit Geospatial Technolgies - izay manolotra rindrambaiko fanoratana 3D, topografika 4D, famoriam-bola amin'ny drôna.
Ireo fahazoana ireo dia ampahany amin'ny teknolojia mandroso tsara, izay ahafahana manatsara ny fandrafetana nomerika an-tanàn-dehibe. Fahazoana angon-drakitra avy amin'ny tanàna amin'ny alàlan'ny drôna, mifototra amin'ny 4D - Orbit GT-topografika, miditra ao amin'ireo fampahalalana toy ny Open Roads - Bentley ary miteraka simulation miaraka amin'ny CUBE, fifamoivoizana ny angon-drakitra fananana eny an-dàlana dia azo ary akaiky haorina, izay iodonan'ny tena tontolo.
Ny fametahana modely misy ireo fitaovana ireo, ahafahana mamantatra ny sata sy ny fanatontosana ireo fotodrafitrasa sy ny fotodrafitrasa, - iray amin'ireo tanjon'ny fahazoana izany. Taorian'ny nahazoana ny angona rehetra, miaraka amin'ny serivisy Bentley dia afaka miditra amin'ity data ity ireo liana, manamarina ny zaza kambana.
«Faly izahay fa tafiditra ao amin'ny Bentley Systems. Ny mpanjifantsika sy ny mpiara-miasa aminay dia hanana fotoana mahavariana mba hampidirana tsara ny drafitra, ny famolavolana ary ny fampandehanana ireo rafitra fitaterana multimodal. Citilabs, ny iraka ataonay dia ny mamela ny mpanjifantsika manararaotra ny angon-drakitra mifototra amin'ny toerana misy azy, ny modely amin'ny fitondran-tena ary ny fianarana milina amin'ny alàlan'ny vokatrao mba hahatakatra sy haminavina ny hetsika any amin'ireo tanànantsika, faritra ary firenentsika. ary ny fitsangatsanganana mikasa hanatsara ny famolavolana sy ny fomba fiasan'ny rafitra mihetsika «rahampitso». Michael Clarke, filoha sy CEO ny Citilabs
Fehiny, herinandro mahaliana no miandry antsika. Hamoaka lahatsoratra vaovao izahay amin'ny andro manaraka.
Previous Post«Previous Famaritana indray ny foto-kevitra ara-teknika Geo-Engineering
Next Post Famolavolana famolavolana - fanoloran-tena hampandroso ny BIM amin'ny alàlan'ny Digital Twinsmanaraka »